Ahitana an'i Indonezia sy Afrika ny fizahan-tany amin'ny ranomasimbe indianina: fantatry ny mpitondra any Seychelles | Fahafahana mampiasa vola
Home » Vaovao momba ny famatsiam-bola fizahan-tany » Ny fizahan-tany any amin'ny Ranomasimbe Indianina dia misy an'i Indonezia sy Afrika: fantatry ny mpitondra Seychelles iray
Ny fizahan-tany any amin'ny Ranomasimbe Indianina dia misy an'i Indonezia sy Afrika: fantatry ny mpitondra Seychelles iray
Ny fametrahana ny vondrona Indoneziana vondrona any Indonezia ho an'ny fizahantany dia misy an'i Afrika.
Tian'i Indonezia ny zavatra niainan'ny mpanolotsaina tsy miankina Alain St. Ange. I St. Ange no minisitry ny fizahantany taloha tany Seychelles.
Ny morontsirak'i Afrika Atsinanana, Seychelles, Réunion ary Maorisy dia faritry ny Ranomasimbe Indianina. Nosy an'arivony ao amin'ny nosy Indonezia koa no faritra manan-danja amin'ny fizahan-tany amin'ny Ranomasimbe Indianina
Indonezia dia mitady mpanolo-tsaina manam-pahaizana hampandrosoana ny nosy fizahan-tany. Nahita olo-malaza mpizaha tany avy amin'ny firenena iray an'ny Ranomasimbe Indiana, Seychelles.
Ity fomba fiasa ivelan'ny boaty ity dia ampahany amin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny toekarena eo amin'ny ASEAN sy ny Vondrona afrikanina.
Iza no tokony hanana toerana tsara kokoa handinihana ireo firenena aty amin'ny Ranomasimbe Indianina tena samihafa amin'ny alàlan'ny fizahan-tany noho i Alain St. Ange? Misy nosy an'arivony, maro ny mety manana fivoaran'ny fizahantany, fampiasam-bola ary fametrahana toerana.
Alain St. Ange dia minisitry ny fizahan-tany teo aloha tany Seychelles, ary filohan'ny Birao fizahan-tany afrikanina ankehitriny.
St. Ange dia consultant tsy miankina iray taorian'ny nandaozany ny sehatra ho an'ny daholobe ary saika handeha ho any Indonezia izy, hanao mpisava lalana an'io fotoana io ho an'ny fampandrosoana sy fizarana fizahan-tany any Indonezia, saingy miaraka amina afrika afrikana.
St. Ange dia nanatona ny developer Indoneziana iray mba hijery ny hetsika ho an'ny nosy Indonezia maromaro. Ireto nosy ireto dia misy ny Bangka Belitung, eko-paradisa Maratua any Kalimantan Atsinanana, nosy Alor ary Rote any Nusa Tenggara Timur ary ny nosy Banda any Maluku.
Indonezia no firenena mpikambana lehibe indrindra ao amin'ny ASEAN. Ny fizahantany no mitarika any Indonezia ary koa ny faritra maro any Afrika amin'ny fanomanana ny fanokafana ny sisin-tany manerantany.
Indonezia dia toerana fitsangatsanganana tropikaly malaza, manome fahasamihafana ara-kolontsaina, hatsaran-tarehy voajanahary mahatalanjona, ary toeram-ponenana kilasy an'izao tontolo izao amin'ny vidiny mirary.
Nilaza i St. Ange eTurboNews: “Misy fitoviana amin'i Indonezia sy Afrika. Ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana, ny fampiasam-bola, ny fanatrarana dia mety hitondra tombony lehibe amin'ny Ranomasimbe Indianina sy Indonezia. ”
Raha nokaramaina ho mpanolo-tsaina tsy miankina i St. Ange dia mikasa ny hanampy an'i Indonezia amin'ny fitaterana sarotra ny fizahantany amin'ny fananganana indray ny fizahan-tany mandritra ny areti-mandringana manerantany, ary aorian'ny COVID-19.
St.Ange dia antenaina fa handeha ho any Indonezia amin'ny volana aprily.
Hisy fihaonana amin'ny Minisitry ny fizahantany Indoneziana Sandiaga Uno any Jakarta. Uno sy St. Ange vao tsy ela akory izay dia nihaona tamina adihevitra momba ny Zoom avo lenta nataon'ny Fizahantany manerantany Network (WTN). Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina dia mpiara-miasa stratejika amin'ny WTN, ary i Indonesia dia nasaina hanatevin-daharana ny fikambanana sy ny adihevitra momba izany fananganana.travel Nanomboka tany amin'ny firenena 127 ny WTN.
Alain St.Ange, Seychelles Minisitry ny fizahantany teo aloha